Video: Ojiji na Imewe
Jon Arnold na-arụ ọrụ dị ịtụnanya na-akọwa ihe ụlọ ọrụ ya na-arụ, Tuitive = Usability. Enwere ụfọdụ ngwa ngwa dị egwu na-anaghị ahụ ọkụ. Ngwa ahụ nwere ike idozi nsogbu ụfọdụ siri ike, mana ọ bụrụ na ọ nweghị onye nwere ike ịchọpụta otu esi eji ya, ịhapụ ga-adị elu ma ahịa ga-esi ike.
Ndị njikwa ahazi, ndị njikwa ngwaahịa na ndị na-ese ihe osise na-ekpebi ụdị na ngwa ga-adị. Ọ bụ onye ọrụ kpebiri iji ya eme ihe! Ndị ọkachamara eji eme ihe na-ahụ ma bulie mmekọrịta na sọftụwia iji hụ na ọ kensinammuo ma dị mfe iji. Akwa video.
Ndị nkuzi na-enye ọrụ ndị a:
Nyocha Onye ọrụ - "Mara gị ọrụ, n'ihi na ha abụghị gị." Kama ịhazi maka “onye ọrụ,” ka anyị kpughee ezi mkpa, omume na ebumnuche ndị ọrụ gị.
Nwekọrịta mmekọrịta - Mmekọrịta mmekọrịta bụ ebe ihe ọmụma banyere ebumnuche ndị ọrụ gị sụgharịrị gaa arụmọrụ bara uru ma dị mfe iji.
Njiji ihu njirimara - Ezigbo imewe nwere ike mgbe ụfọdụ ịma mma nke okike nka na oge ndị ọzọ ịma mma nke ịdị mfe. Anyị ga-enweta ya naanị, yana n'ụzọ na-akwado atụmatụ gị niile.
Web Design - Usoro Designlọ Ọrụ Anyị Na-eche Maka islọ Ọrụ dị mma maka weebụsaịtị ndị dị mkpa karịa broshuọ n'ịntanetị.
Nnwale nnwale - Kwụsị nkọ. Nnwale ule anyị ga-eme ka ụzọ dị nso ma dị mma maka nsonaazụ dị ukwuu.
Lelee nke Jon Arnold kediegwu blog.
Tags: kensiri ikejon arnolduruahụmahụ onye ọrụ